हामी उपभोक्ताको पहिलो रोजाइमा - Karobar National Economic Daily
हामी उपभोक्ताको पहिलो रोजाइमा
query_builderJuly 25, 2017 1:31 PM supervisor_account visibility227
सजन देवकोटा उपाध्यक्ष– बिक्री तथा बजार प्रवद्र्धक शिवम् सिमेन्ट
भूकम्पपछि सिमेन्ट उद्योगहरूको अवस्था कस्तो छ ?
भूकम्पपछि जसरी हामीले सिमेन्टको खपत एकदम्मै बढ्छ भन्ने सोचेका थियांै । निर्माणको गति दु्रत हुन्छ भन्ने सबै व्यवसायीको सोच पनि त्यहीँ थियो । तर, सिमेन्टको खपत भने हामीले सोचेजस्तो भएको थिएन ।
भूकम्पमा घर भत्किने अधिकांश मानिसहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । उनीहरूमध्ये धेरैका कमसल पूर्वाधार भएका अधिकांश घरहरू भत्किन पुगेको थिए ।
आर्थिक अवस्था पनि कमजोर भएकाले घर भत्किने धेरैजसोले भूकम्पपछि तुरुन्त घर निर्माण गर्ने अवस्था थिएन । भूकम्पपछि पुनर्निर्माण तथा विकासका कार्यहरू द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न नसकेकाले हामीले सोचेजस्तो सिमेन्टको खपत हुन सकेन ।
तर, अहिले अधिकांश भूकम्प प्रभावितहरू आफैं जोहो गरी तथा सरकारी सहयोगले घर निर्माणमा लागेका छन् । त्यसैगरी विकास निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढ्न थालेका छन् । जसले गर्दा सिमेन्ट खपतको गति पनि दिन प्रतिदिन बढ्दो छ ।
कच्ची घरमा रहरले मानिसहरू बसेका थिएनन् । भूकम्मपछि तुरुन्त कच्ची घर भत्केपछि पक्की घर बजाउने अवस्था थिएन । यो स्थिति एक वर्षसम्म थियो । उनीहरू एक वर्षपछि विस्तारै दुःख गरेर घर बनाउने तयारीमा लागेका छन् । नेपाल विकासशील राष्ट्र भएकाले विकासका कार्यहरू अगाडि बढेका छन् । जसले गर्दा सिमेन्ट उद्योहरूले समेत गति लिएको पाइन्छ ।
शिवम् सिमेन्टले केही समय अगाडि २० बोरा सिमेन्ट किन्दा एक बोरा सित्तैमा दिने योजना ल्याएको थिायो । यसले गर्दा बजार प्रवद्र्धनमा कस्तो योगदान पुयाएको छ ?
हामीले शतप्रतिशत क्षमतामा सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ । कुनै पनि सामानलाई के कारणले ब्रान्ड बनाउन भन्ने कुरालाई गहन अध्ययन गर्ने हो भने त्यसमा ग्रहाकको ठूलो हात हुन्छ । धेरैजसो मानिसहरू कम्पनीले ब्रान्ड बनायो भन्ने ठान्छन् ।
तर, हामीहरू त्यसलाई मात्र विश्वास गर्दैनौं । ब्रान्डका पछाडि सबभन्दा पहिला त उत्पादित सिमेन्टको गुणस्तरको कुरा हुन्छ । त्यसका साथसाथै ग्राहकको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण योगदान छ । शिवम् सिमेन्टका खरिदकर्ताले आफूले सिमेन्ट खरिद गरी प्रयोग गरेपछि कुनै पनि मानिसलाई सिमेन्ट किन्न सल्लाह दिनुप¥यो भने सबैभन्दा पहिला शिवम् सिमेन्ट किन्न सल्लाह दिन्छन् ।
मानिसको जस्तै कुनै पनि उत्पादनको लाइफ साइकल हुन्छ । यो एउटा गतिमा बढ्दै–बढ्दै जान्छ । एउटा विन्दुमा पुगेपछि बढ्ने क्रम कम हुन्छ । कुनै पनि ब्रान्डले एउटा विन्दुमा पुगेपछि आप्mना ग्राहकहरूलाई पुनः सम्झाउनु पर्ने हुन्छ ।
यो कार्यले बिक्री वितरणलाई माथि तिर लैजान मद्दत गरेको हुन्छ । हामीलाई बजार तथा उत्पादनको विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यसलाई मध्यनजर राखी शिवम् सिमेन्टले प्रत्येक २० बोरा खरिदमा अर्को १ बोरा सिमेन्ट सित्तैमा पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसले गर्दा हाम्रो ब्रान्डलाई माथि उकास्न केही हदसम्म भए पनि सहयोग गरेको थियो ।
नेपालमा ४० को हाराहारीमा सिमेन्ट उद्योगहरू छन् । यी उद्योगहरूको बीचमा उत्पादन तथा बजारीकरणको हिसाबले शिवम् सिमेन्टको स्थान कहाँ छ ?
सिमेन्टको उत्पादन तथा बजारीकरणमा विविध पक्षको उत्तिकै महत्व हुन्छ । सिमेन्ट एउटा यस्तो वस्तु हो यसमा क्षेत्रीयता जोडिएको हुन्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्था र सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन भएको क्षेत्रले यसको मूल्य निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ।
पूर्वमा अवस्थित सिमेन्ट उद्योगहरूबाट उत्पादित सिमेन्ट पश्चिममा जाँदा पश्चिमामा उत्पादिन सिमेन्टभन्दा केही हदसम्म भएपनि महँगो पर्न जान्छन् । जसको एक मात्र कारण भनेको गाडी भाडा नै हो । जतिभित्र ग्रामीण क्षेत्र वा वस्तीमा गयो त्यति नै मूल्य बढी पर्न जान्छ ।
त्यति मात्र होइन ग्रामीण भेगका अधिकांश मानिसहरूको आर्थिक अवस्थासमेत कमजोर हुन्छ । तर, त्यस्ता ठाउँहरूमा सिमेन्टको मूल्य भने बढी हुन जान्छ । क्षेत्रीयताले गर्दा पनि यसको बजारीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । हामी पनि हालसम्म सीमित क्षेत्रहरूमा मात्रै उपलब्ध छांैँं ।
पश्चिम क्षेत्रमा पुग्न सकेका छैनांै । यसको एउटा कारण त हाम्रो उत्पादन क्षमता कम हो । तर, पनि हामी जति ठाउँमा उपलब्ध छौं त्यति नै ठाउँमा शिवम् सिमेन्ट लोकप्रिय झनझन बढ्दै गइरहेको पाइन्छ । आज शिवम् सिमेन्टले बजारमा राम्रो स्थान ओगट्नुमा यसका खरिदकर्ताहरूको नै महत्वपूर्ण हात छ ।
सथै हामीले गुणस्तरमा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने भएकाले खरिदकर्ताहरूले शिवम् सिमेन्टलाई नै राजाइकोे सिमेन्ट बनाएको पाइन्छ । कसैले पनि शिवम् सिमेन्ट एक पटक प्रयोग गरेपछि पुनः ग्रयोग गर्ने त छँदै छ उनीहरूले आफ्नो वरिपरि भएका मानिसहरूलाई समेत यहीँ सिमेन्ट प्रयोग गर्न सुझाव सल्लाह दिएको पाइन्छ ।
शिवम् सिमेन्टले हाल दैनिक कति बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ ? उत्पादन क्षमता बढाउने योजनाहरू के कस्ता छन् ?
हामीले दैनिक ४४ देखि ४६ हजार बोराको दरमा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छाँै । यस सिमेन्टको सबै उत्पादन पूर्वमा मात्रै खपत हुँदै आइरहेको छ । पूर्वी क्षेत्रमा समेत सिमेन्ट पु¥याउन सकिरहेको स्थिति छैन । जसले गर्दा हामी हेटैंडामा नै दैनिक न्यूनतम ६० हजार बोरा उत्पादन गर्ने लक्ष लिएका छौं । जुन कार्य दु्रत गतिमा अगाडि बढिसकेको छ ।
जसले गर्दा पूर्वी क्षेत्रको माग धान्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसका साथसाथै पश्चिम क्षेत्रलाई समेट्न हाम्रो सहकार्यमा नवलपरासिमा हंसी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने योजनामा छौं । यो कार्य पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ ।
बजारमा यो सिमेन्टको राम्रो खपत भएको पाइन्छ । शतप्रतिशत उत्पादन गर्दा पनि सबै क्षेत्रमा पुग्न सकेको छैन भन्ने गुनासो छ । नेपालका सबै ठाउँमा आफ्नो उत्पादन पुर्याउने योजनाहरू के–के छन् ?
हो हामीले शतप्रतिशत उत्पादन क्षमतामा सिमेन्ट उत्पादन गर्दा पनि नेपाल भरका सबै क्षेत्रहरूमा पु¥याउन सकिएको छैन । यसका पछाडि विविध कारणहरू छन् । प्रमुख कारण त जुन क्षेत्रमा उत्पादन गर्दै आएका छौं त्यही क्षेत्र वा त्यस वरिपरिका क्षेत्रहरूमा नै यसको खपत सीमित भएको छ ।
यो क्षेत्रमा नै माग र आपूर्तिमा खाडल छ । माग बढी र आपूर्ति कम छ । सिजनमा त यसको खाडल झन ठूलो हुँदै जान्छ । त्यस कारणले गर्दा हेटैंडामा उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने कार्य सुरु भइसकेको छ ।
हेटैंडामा दैनिक न्यूनतम ६० हाजार बोरा उत्पादन गर्ने कार्य अगाडि बढिसकेको छ । पश्मि क्षेत्रमा समेत हाम्रो सहकार्यमा हंसि सिमेन्ट छिट्टै नै आउँदै छ । पश्चिमको बजार यस सिमेन्टबाट माग पूरा गर्ने लक्ष्यमा छौं ।
नेपाल अहिले सिमेन्टमा आत्मनिर्भर छ वा छैन ? सरकारले के गर्दिएको खण्डमा यस्ता उद्योगहरू आत्मनिर्भर हुन सक्छन् ?
नेपाल अहिले सिमेन्ट उत्पादन क्षमताको आधारमा आत्मनिर्भर छन् । तर, उत्पादनको हिसाबले आत्मनिर्भर भइसकेको स्थिति छैन । सिमेन्ट उद्योगहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने सरकारले विद्युत् निरन्तर आपूर्ति उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । जसले गर्दा सबै सिमेन्ट उद्योगहरूलाई उत्पादनमा कुनै असर गर्दैन ।
भूकम्प सिमेन्ट शिवम् सिमेन्ट